သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): ကျနော်အမြင်ကပ်ဆုံး ဘလော့ဂါတစ်ယောက်အကြောင်း
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 12:52
:D.. လုပ်ပြီ.. သူကြီးကတော့.. ဟိုတစ်ခေါက်ကပြောသလိုပေါ့... နောက်တစ်ပုဒ်ဆို သူကြီးမင်းတို့ အရိုက်ခံရတော့မယ်ဆိုလို့ အပုဒ်ရှောင်တာမလား.. ဒါတွေနှပ်ပါ့... :D
Friday, 23 July 2010 at 14:31:00 BST
Friday, 23 July 2010 at 14:35:00 BST
ဟားဟားးး ကိုကိုမောင် သူကြီးမင်း ရေ
ရွှေစင်ဦး ကိုတော့ လာမရွှီး နဲ့ မရဘူး ကိုကိုမောင် ပြောတဲ့ အရည်အချင်း နဲ့ ပြည့်စုံတာ သူ တယောက် ဘဲ ရှိမယ်ဆိုတာ သိတယ်နော်
ဘယ်သူတွေကို ဘယ်တုန်းက ဘယ်လောက်များ ပြောချင်နေလို့ ပွင့်ထွက် သွားတာလည်း ဟင် သူ့ခမျာ သနားစရာ
Friday, 23 July 2010 at 14:48:00 BST
ဒီပိုစ့်ဖတ်ပြီး ဘလော်ဂါတစ်ယောက်ယောက် အကြောင်းရေးထားမှန်းသိလိုက်တယ်.
သိပ်တူတာဘဲ.. အချက်အလက်တွေ အမူအကျင့်တွေက...
နောက်ဆုံးတော့လည်း ထင်တဲ့သူဖြစ်နေတာကိုးး)
Friday, 23 July 2010 at 15:03:00 BST
အင်းး ဖတ်ကတည်းက ကိုကိုမောင်တစ်ယောက် ဒီလောက်သတ္တိရှိရှိနဲ့ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ကို ဝေဖန် ရဲမယ်လို့ မထင်ပါဘူးလို့...။
Friday, 23 July 2010 at 15:52:00 BST
ဒါမျိုးက သင်း (ဒင်း) ပဲ လုပ်တတ်တာ :)
Friday, 23 July 2010 at 16:13:00 BST
ခေါင်းစဉ်စ်ိတ်ဝင်စားလို့လိုက်လာတယ်။ ထင်သားဘဲ သူဘဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာ ဘွီဒို ဖိုင်ကတော့အတော်ဆိုးတာဘဲ ညလဲ ၁၂ နာရီထိုးတော့မယ်ဆိုတော့သွေးပျက်မတတ်ဖြစ်သွားတယ။် ဒီကလည်း မီးနိုပေါ့စ် ဖြစ်နေတာဆိုတော့သွေးနုသားနုရယ်။
Friday, 23 July 2010 at 16:48:00 BST
အဟုတ်မှတ်လို့ကြည့်လိုက်ပါတယ် တော်တော်ကိုလှတဲ့သူပါလား :P
Friday, 23 July 2010 at 18:16:00 BST
အော် မေ့သွားလို့ အသံပါကောင်းတယ်ဗျို့ :P
Friday, 23 July 2010 at 18:29:00 BST
Friday, 23 July 2010 at 19:08:00 BST
ထင်ပါတယ် စိတ်သဘောကောင်းတဲ့ဒို့ အစ်ကို
လားဒဲ့ ဖဲ့မှာ တွတ်လောက်ဆိုရင်တောင်ယုံနိူင်
သေးတယ် ခုက ဒဲ့ဆိုတော့ထင်တဲ့အတိုင်း
တူ့ ကိုတူ့ ပြန်ဖဲ့ ထားတာဘဲ အဲပြောလိုပြောတာ
တွေ့ ရတယ်အစ်ကိုရေ ... ကျွန်တော့်ခန့် မန်း
Friday, 23 July 2010 at 19:38:00 BST
လန့်တော့လန့်သွားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အသက်တော့ထွက်မသွားဘူး တော်သေးတယ်။ ။ ရပါတယ် ရပါတယ်။ အသံပါပါသေးတယ်။ အဟုတ်ဘဲ့ လန့်ထှာ။
Saturday, 24 July 2010 at 01:58:00 BST
Saturday, 24 July 2010 at 02:50:00 BST
ထင်သားပဲ သူပဲလို့.. သိပြီးသား ။ အရည်ချင်းတိုက်ဆိုင်တာသူပဲ..ရှိတာကို..း))))
သူကြီးပြောရဲတာလည်း သူပဲဆိုတာ သိနေတယ်လေ..
သူကြီးတောင် မကြောက်ပဲ ပြောရဲတာဆိုတော့ တို့လည်း ကြောက်ဖူး..။ သေချာကို ကလစ်လုပ်ကြည့်သွားတာပဲး))
ဟာဟား တော်တော် နောက်တာပဲ.
Saturday, 24 July 2010 at 08:15:00 BST
သိတယ် သူ့ကိုယ်သူပဲ ဖွတော့မယ် ဆိုတာ :P
Saturday, 24 July 2010 at 11:54:00 BST
Saturday, 24 July 2010 at 12:18:00 BST
မဆိုးဘူးဗျ .. idea လေး
Saturday, 24 July 2010 at 14:46:00 BST
သူ့ကိုသူ ပြန်ညွှန်းထားပေမယ် ဒီပိုစ့်က တစ်ခြားဘလော့ဂါတစ်ယောက်ရဲ့ အမူအကျင့်တွေနဲ့ တော်တော်တူနေတယ်။ ထင်တာမမှားဘူးဆိုရင်ပေါ့လေ။ :))
သြော်....ဒါနဲ့ ကိုကိုမောင်ဆိုတဲ့ဘလော့ဂါက တကယ်ကိုရုပ်ချောအသံကောင်းကိုးးးးးး။ :))
Saturday, 24 July 2010 at 16:55:00 BST
ဟွန်း ...တကယ်မှတ်လို့ ...
ကလစ်လိုက်တာ ရုပ်ကြီးက လန့် သွားတာပဲ
Saturday, 24 July 2010 at 22:54:00 BST
ခြေဆင်းပျိုးကတည်းက သဘောပေါက်လိုက်တယ်။ သူပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့။ ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲလေ။ သူပါပဲ... ဟဟ...
Sunday, 25 July 2010 at 01:46:00 BST
Sunday, 25 July 2010 at 07:09:00 BST
ရေးထားတဲ့ comment 21 ခုလုံးက အဲဒီလူကို သိနေကြတယ်ဆိုပါလား..။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခေတ်နောက်ကျနေတာ အခုမှပဲ သိတော့တယ်...(အလုပ်တွေအရမ်းရှုပ်နေလို့)..။
Sunday, 25 July 2010 at 23:21:00 BST
သတ္တိရှိတဲ့ လူစွမ်းကောင်းမင်းသားကို ကော
ရန်စတဲ့ လူကြမ်းမင်းသားကိုကော တစ်ယောက်ထဲနဲ့ နှစ်ကိုယ်ခွဲရိုက်ထားတယ် ဆိုတာသိတာပေါ့။
အရုပ်ဆိုး ပေမယ့် သဘောကောင်းလေးဆိုတော့ အားပေးပါတယ်။
Monday, 26 July 2010 at 14:56:00 BST
သူများကို အမြင်ကပ်တာတော့ ပေါ်တင်ကြီး မဆော်ရဲဘူးလို့ ထင်တယ်လေ... ဘာပဲပြောပြော ဘာများထူးဆန်းမလဲလို့ သွားကြည့်တာပေါ့... ဘယ်ရမလဲ ဒါမှ ခေတ်မှီမှာလေ... :)
Wednesday, 28 July 2010 at 10:10:00 BST
ပိုစ်လေးရယ်.. တီထွင်မှုကလေးရယ်.. တော်တော်လေး သဘောကျသွားပါတယ်း))
Thursday, 29 July 2010 at 08:44:00 BST
Thursday, 29 July 2010 at 11:30:00 BST
တတ်လဲတတ်နိူင်တဲ့ ကိုကိုမောင် ။ ဟင်းးး စိတ်တိုတာ ... ပထမတခါ အလိမ်ခံရတာတင်မမှတ်ဘဲ နောက်ဆုံးတခုကိုပါ ကလစ်လိုက်တယ် မေ့မသွားတာ ကံကောင်းတယ် . ဟင်းးနော် ..သူကြီးတော့ မလွယ်ဘူး နောက်ဆို သတိကျပ်ကျပ်ထားမှကို ရမယ်း(
Friday, 30 July 2010 at 12:16:00 BST
အတော်ဆိုးတဲ့ ငါ့အစ်ကိုကြီး ကိုကိုမောင်ပဲ
အဟုတ်မှတ်လို့ ကျမဖြင့် ဖတ်လိုက်ရတာ ... ဟောဟဲကိုဆိုက်လို့း( လင့်ပေးထားတာကို အူတိအူကြောင် သွားနှိပ်လိုက်မိမှပဲ ခေါင်းစဉ်ကို သေသေချာချာမဖတ်မိတဲ့ ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကို ရယ်ချင်သွားတယ် .... နှင်းဟေမာတို့ တုံးလိက်ပုံများ
Friday, 30 July 2010 at 23:42:00 BST
Saturday, 31 July 2010 at 04:46:00 BST